အရင်းအမြစ်များ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာရေးခြင်းစင်တာများအသင်း
IWCA မှထုတ်ဝေသောကျမ်းဂန်စာတမ်းများ (Antiracism Activism) (၂၀၁၄)
လူမျိုးရေး - တရားမျှတမှုအတွက်ဖတ်ရန်အတွက် - IWCA-SIG-Antiracism-Annotated-Bibliography-2014ဒေါင်းလုပ်
စာရေးခြင်းစင်တာဂျာနယ်: IWCA ဂျာနယ်။ မှာယူပါ အသင်းဝင် Portal.
ရွယ်တူချင်းသုံးသပ်ချက် - အွန်လိုင်း open-source IWCA ဂျာနယ်။
အခြားအရေးအသားစင်တာပညာသင်ဆု၊ သုတေသန၊ စာပေများ
IWCA ဆုကိုရခြင်း ဆောင်းပါးများ နှင့် စာအုပ်များ
အဆိုပါ ရေးသားစင်တာများသုတေသနစီမံကိန်းသူသည် ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် Louisville တက္ကသိုလ်မှစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Arkansas Little Rock တက္ကသိုလ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်နိုင်ငံတကာစာအရေးအသားစင်တာများ၏သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကြိုးစားသည်။ အရေးကြီးသောအရေးအသားစင်တာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများစုဆောင်းထားသည့်မှတ်တမ်းနှင့်အရေးအသားစင်တာများတွင်ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များ၏အခြေခံစံနှုန်းစစ်တမ်းတို့ပါဝင်သည်။ WCRP စစ်တမ်း၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ် ဒီမှာ။ ထိတှေ့ Allison ဟော်လန် WCRP နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သို့မဟုတ် ဟယ်ရီ Denny ယင်းနှင့် ပတ်သက်. WCRP စစ်တမ်း.
WCENTER စာရင်းများWCENTER သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိစာရေးဆရာများအတွက်စာပို့စာရင်းဖြစ်သည်။ WCENTER ကိုစာရင်းသွင်းရန် Elizabeth Bowen ကိုဆက်သွယ်ပါ elizabeth.bowen@ttu.edu ။ မော်ကွန်းတိုက်များကိုကြည့်ရှုရန်၊ သင်သွားနိုင်သည် http://lyris.ttu.edu/read/?forum=wcenter။ အကယ်၍ သင်သည်စာရင်းသို့မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့လိုပါကသင်၏အီးမေးလ်ကိုလိုက်လျောညီထွေစွာဖြေရှင်းပါ။ wcenter@lyris.ttu.edu။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ WCENTER သည် IWCA ၏တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပါ။ IWCA သည်၎င်းကိုအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ထားသည့်ဆာဗာကိုမထိန်းချုပ်ပါ။
SSWC စာရင်းဖြေ - SSWC ကစာပို့စာရင်းတခုပါ အလယ်တန်း ကျောင်းအရေးအသားစင်တာဒါရိုက်တာများ။ SSWC-L တွင်စာရင်းသွင်းရန်အီးမေးလ်ပို့ပါ LISTSERV@LISTS.PSU.EDU နှင့် “ SSWC-L ကိုစာရင်းသွင်းပါ မင်းနာမည်" မက်ဆေ့ခ်ျကို၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။
IWCA ပူးပေါင်း @ CCCCs
စာအရေးအသားမျိုးတူကျူရှင်ဆိုင်ရာ အမျိုးသားညီလာခံ (NCPTW)
Program Administrators ရေးသားခြင်း